धीरकुमार श्रेष्ठ – मझेरी डट कम
आज ठिक तीस वर्षपछि ऊसँग भेट भयो । तीस वर्षअगाडि उसको आत्मविश्वास र स्वाभिमान जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै थियो ।
‘हमरा पशुपतिके दर्शन नै करेबै ? (मलाई पशुपतिको दर्शन गराउनुहुन्न ?)’ उनी अर्थात् जुगला मामाको मप्रति सधैँ गुनासो हुन्थ्यो ।
काठमाडौँबाट घर पुगेर भेट हुनुहुँदैनथ्यो, उनको मुखबाट माथिको वाक्य फुस्किहाल्थ्यो । त्यसपछि सानोमा ‘तपाईँलाई यसरी हुर्काएँ, काँधमा बोकेर कहाँकहाँ पुर्याएँ’ भन्न थालिहाल्थे उनी । म जहिले पनि ‘अर्कोपटक घर आउँदा तिमीलाई लान्छु’ भनी आश्वासन दिन्थेँ । मेरो आश्वासनलाई प्रत्येकपटक अस्वीकार गर्थे र भन्थे, ‘जैया अहाँ यही कहिके भुलावैछी (तपाईँ जहिले पनि यसै भनी अलमलाउनुहुन्छ । )’
‘अर्कोपटक त तिमीलाई जसरी भए पनि लान्छु ।’ भनेर थुम्थुम्याउँथेँ ।
तिमीले तिम्रो जीवनको पहिलो र अन्तिम दिनका लागि पहिलो पाठशालामा टेकिसकेपछि तिम्रो शिक्षारम्भ गाउँमै विष्णु मामाले आफ्नो दुवारमा राखेका मास्टरजीसमक्ष भयो । मास्टरजी बिहान बेलुकाको खाना त विष्णु मामाकै घरमा खान्थे तर भिन्सर (बिहान) को जलखैचाहिँ उनीसँग पढ्ने तिमी विद्यार्थीहरूले पालैपालो झर्काको गहिरो थालमा राखेर लगिदिनुपर्थ्यो । उनको जलखैमा हुन्थ्यो सिलौटोमा मसिनो गरी पिसेको हरियो नुनखुर्सानीमा तिखो राग आउने करूवा तेल तपतप चुहिने गरी मसमसी मुछेको भुजा (खट्टे) । यतिमात्र होइन, भकभक उम्लिरहेको करुवा तेलमा भुक्क-भुक्क उठेर पट्पटी फुट्ने गरी तारेको रातो खुर्सानी तर कालो भइसकेको । मास्टरजी सबभन्दा पहिले तिमीहरूकै अगाडि जिब्रो पड्काई-पड्काई तिम्रा बतियारी (तिमी होइन नि) ले लगिदिएका जलखै ‘सी … ऽ … ऽ … सी … ऽ … ऽ …’ गर्दै खान्थे । त्यतिबेला तिमीहरूका जिब्रामा तरक्कै पानी आउँथे र घुटुक-घुटुक थुक निल्दै एकअर्काको मुखामुख गर्दै बस्थ्यौ । जलखै खाइसकेपछि मास्टरजी ठाडो घाँटी लगाएर किलकिले तल र माथि गर्दै गर्दै एक लोटा पानी एक थोपो पनि भुइामा नझारी घटघटी पिउँथे र पलेटी कसेर विष्णु मामाको ग्वाहालीमा आसनी जमाउँथे । अँ, आसनी भन्दा पो समझेँ, तिमीहरूले चाहिँ आफै आफ्ना लागि ओछ्यान बोरा बोक्नुपर्थ्यो । होइन भने विष्णु मामाका गाईंभैँसीले शौचालय बनाएर भिजाएका गन्धे ग्वाहालीमा चिसै बस्नुपर्थ्यो ।
तिमीले तिम्रो शैक्षिक विगतका बारेमा जान्न चाहेका रहेछौ । ढिलै भए आज लामो समयपछि तिमीलाई तिम्रो शैक्षिक विगतले आकर्षित गरेछ । खुसी लाग्यो । तिम्रा शैक्षिक विगतका बारेमा सम्पूर्ण कुरो त म पनि जान्दिनँ तर पनि स्मृतिको धमिलो चित्रमा अवशेषका रुपमा बाँकी रहेका केही भग्न इतिहासबाट सम्भव भएसम्मका विगत टिपेर पठाउँदै छु । तिमीलाई काम लागे प्रयास सफल भएको मान्नेछु ।
सप्तरीका दुर्गम गाउँहरूमध्येको एउटा गाउँ सोनरा । तीनतिरबाट दुईओटा खोलाले घेरिएको । एकातिर जिता खोला र अर्कोतिर अनाम खोला । यी दुवैको दोभानले घेरिएको तेस्रो किनारमा अवस्थित थियो (छ ?) पकरी गाउँ विकास समितिभित्रको एउटा गाउँ सोनरा । त्यहीँ २०१८ सालको मध्य वर्षाका दिनमा एउटा बालककको जन्म भएको थियो ।
अपराधीहरू … !
अचेल दिन नबिराई सुदूरपश्चिमेलीहरू राष्ट्रिय समाचारमा छाएका छन्, ‘आज यतिजनाले, भोलि उतिजनाले मुक्ति पाए ।’
यस्तै–यस्तै हेर्दा–हेर्दा आँखामात्र होइन सुन्दा–सुन्दा कान पनि पाकिसक्यो । मुक्तिकामी जनताको देशमा जुक्ति नै नलगाई यत्रो उपलब्धि प्राप्त गर्दा यी अलपत्र पर्न नसकेका समाचारपत्रले कोकोहोलो मच्चाउँछन् ।
गाउँबाट सहर पढ्न आएको गोफ्ले सहरी युवतीहरूको सुन्दरताबाट मोहित भयो। गाउँमा धूलोमैलो र फाटेका लुगामा देखेको युवतीका तुलनामा सहरी युवतीलाई स्वर्गकी अप्सरा नै ठान्न पुग्यो। गाउँमा युवतीहरू कम देखिने र सहरमा जताततै देखिने गरेको घटनाबाट उसको मन पढ्नभन्दा पनि तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सके गाउँको अभावग्रस्त जिन्दगीबाट मुक्ति पाउन सकिने ठान्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रतियोगीहरू पठाउँदा जहिले पनि खेलकुद परिषद्लाई नातावाद, फरियावाद, कृपावाद, भनसुनवाद्, आर्थिक लेनदेनवाद आदिजस्ता आरोप लाग्ने गरेका थिए। त्यस कारण यस पटक यस्ता आरोप नलागून् र योग्य खेलाडी छानिऊन भनी परिषद्ले एउटा स्वतन्त्र छनौट समितिको गठन गर्‍यो। समितिले छनौट प्रणालीलाई पारदर्शी र भरपर्दो पार्नाका लागि रङ्गशालामा एउटा राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताको आयोजना गर्‍यो। प्रतियोगितामा भाग लिनाका लागि योग्यता र नागरिकताबाहेक अरू कुनै वादसम्बन्धी योग्यताको आवश्यकता थिएन।
नेपालप्रसाद बिरामीले इन्तु न चिन्तु भएको धेरै वर्ष भयो। उसलाई डाक्टरहरूकामा लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाइयो। परीक्षणमा कुनै रोग नदेखिएकोले उसलाई पूर्ण स्वस्थ घोषणा गरियो। तर उनी तङ्ग्रिनुको सट्टा झन्झन् दब्लाउँदै गए। शारीरिक र भौतिकरूपमा कुनै रोग नदेखिएपछि अन्ततः उनलाई मानसिक अस्पतालमा लगियो। त्यहाँ उसका बारेमा सबै कुरा सुनिसकेपछि डाक्टरले सोधे, “गोपालप्रसाद रिमाल पनि एक समय यस्तै भएका थिए। कतै तपाईं पनि खाँट्टी राष्ट्रवादी त होइन?”
“तपाईंका नाममा एउटा बाकस आउँदैछ । हाम्रा मान्छेले एक-दुई दिनभित्र घरमै ल्याइदिन्छन् । कृपया बुझेको भर्पाइ पठाइदिनुहोला,” सरलाले फोनमा भद्र आवाज सुनी ।
वर्तमान – साइरन बजिरहेछ । लाइनअगाडिको खुला चउरमा उपस्थित हुनका लागि जनाउ हो यो । जो जुन अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा दगर्ुछन् । संभावित त्रास सबैका आँखामा छ, अनुहारमा मृत्युको भय टाँसिएको छ । सधैँ एकनाशको जिन्दगी बित्न थालेको दशक पुग्न लागिसक्यो । उही बम, उही बारुद, उही मृत्युको समाचार । लाग्छ, मानिसको वरिपरि जीवन होइन मृत्यु बाँचिरहेछ । मानिस जीवनका नाममा मृत्युका डोली बोकिरहेछन् । काँधमा बन्दुक होइन मृत्युको सन्देश बोकिरहेछन् । गलामा गोलीका माला होइन, विषालु गोमन र्सप बोकिरहेछन् जसले छानीछानी डसेर तत्काल मृत्युलोकमा पुर्‍याउनसक्छ । तुम्लेटमा पानी होइन मृत्युका थोपाथोपा सञ्चित छन् । उफ ! कस्ता दिन आए !
नजिकको तीर्थ हेला भनेझैँ साँझबिहान बाटामा आउँदाजाँदा, भेट हुँदा तिनीहरूको त्यति वास्ता लागेको थिएन । डेराअगाडि छाप्रामा बस्ने तिनीहरूलाई जब मैले तीन दिनसम्म लगातार देखिन अनि तिनीहरूप्रतिको रुचि बढ्दै गयो । कहाँ गए होलान् , के भए होलान् , किन तिनीहरूको छाप्रामा सधैँ बल्ने टुकी बल्दैन आदिजस्ता प्रश्नहरूले घेर्न थालेपछि म तिनीहरूका बारेमा जान्न उत्सुक भएँ । कहिलेकाहीँ मन वास्ता नगरिएका विषयमा केन्द्रित हुँदो रहेछ । म तिनीहरूको ताल्चा झुन्डिएको ढोकातिर एकटक लगाएर हेर्न थालेँ ।